I-OEM yeAluminiyam yeAluminiyam yeCnc machining HYVC020003
Huayi 4 Pieces imifuno grinder HYZA07001
Thumela uphando Thumela i-imeyile kuthi
4 maleko imifuno grinder
Isetyenziswa ngokubanzi ekugayeni imifuno kunye nezityalo, obu bungakanani be-55mm kulula ukuyiphatha nokucoca.
Njengoko usenokuba uqikelele, i-grinder sisixhobo osisebenzisayo ukophula i-cannabis yakho ibe ziincinci ezincinci zokutshiza izitya ezigudileyo okanye ukusonga amaphepha aqengqelekayo kunye nokusonga okungafunekiyo. Zininzi iindlela zokugaya i-cannabis ukuba awunayo i-grinder, kodwa i-grinders ikhawulezisa inkqubo kwaye inikezela ngezinto ezifana ne-kief catchers.
Umbambisi we-kief ubhekisa kwigumbi elingezantsi kwescreen esiqokelela yonke i-kristal kief enamandla eyanqonqoza amagqabi kwinkqubo yokugaya. Ungayikhupha i-kief kwaye uyongeze ngaphezulu kwesitya sakho, okanye uyisebenzise kamva ukucinezela i-hash yakho okanye upheke ukutya.
Ngaphezulu kwesikrini, uya kufumana igumbi lokugaya "ngamazinyo," okanye iincakuba ezenza wonke umsebenzi. Isiciko se-grinder sinamathele kule nxalenye, kwaye izinto zokugaya zentsimbi zihlala zinemagnethi yokunceda ukugcina izinto zikhuselekile njengoko usila.
Uyisebenzisa kanjani i-Marijuana Grinder
Inyathelo 1: Susa isiciko esingaphezulu. Sebenzisa iminwe yakho ukophula amathupha amakhulu kwaye uwabeke phakathi kwamazinyo e-grind. Ungazikhathazi ngokubeka nayiphi na ihlumelo kwiziko ngqo-kulapho iimagnethi zibeka khona, ke akukho nto embindini eya kutsha.
Inyathelo 2: Buyisela umphezulu wentsholongwane kwaye uyinike malunga nokujikeleza okungama-10, de lonke ihlumelo liwele kwimingxunya. Ungayisusa umphezulu kwaye ucofe ecaleni kwe grinder ukunceda ukukhulula naziphi na iziqwenga ezinamathele emazinyweni.
Inyathelo lesi-3: Khulula igumbi kunye namazinyo ukuze ufumane umaleko webhasikithi ubambe yonke intsangu yakho esemhlabeni. Yilayishe kumbhobho wakho, ngokudibeneyo, okanye ngokungxama kwaye wonwabe!
Inyathelo 4: Nje ukuba uqokelele i-kief kwigumbi elingezantsi, yiphawule ngesiqwenga sephepha okanye ngesixhobo esikrweleyo esibonelelweyo (ayizizo zonke izinto zokuthengwa kwe-grinder ezibandakanya enye, kodwa ziluncedo ngokuqinisekileyo). Kwakhona, unokufefa i-kief kwisitya ukuyenza ibe namandla ngakumbi, okanye uyigcinele enye into. Lumka ngesinyithi esinyibilikayo, njengoko zinokukrwela i-aluminium kunye ne-kief yakho!
Abanye abantu bayathanda ukubeka ubunzima kwigumbi le-kief ukunceda ukubetha i-resin ukusuka kwiscreen ukuya kwisitya esisezantsi. Ipenny ecociweyo okanye i-nickel isebenza ngokugqibeleleyo koku.
Egqithileyo I-grinder yelogo yesiko
Okulandelayo: ukhula besila grinder siko logo
Igama Product: Aluminium imifuno grinder
Igama lebrand: Huayi
Ukugqiba umphezulu: Ukwenza i-Anodizing
I-Aluminium herb grinder, eyenziwe ngeAluminiyam T-6061, elula kunye namazinyo abukhali, alula ukuphatha.
CNC Ingca Grinder
Herb Grinder Custom Ilogo
Icuba leHerb Grinder
Isitshisi seHerb Grill
I-Mini Herb Grinder
I-Mini Herb Powder Grinder
Isixhobo seTitanium Herb
I-grinder yelogo yesiko
I-Custom 4 layer Herb grinder HYCZ90001
ukhula besila grinder siko logo
I-Grinder ye-Herb ye-Wholesale
Isikhuseli sokhula esineLogo yesiqhelo